Chamomile iyo daweyno kale si ay u caawiyaan dheef-shiidka - Hagaajinta Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » Daawooyinka dabiiciga ah »Chamomile iyo daweyno kale si ay u caawiyaan dheef-shiidka - Hagaajinta caafimaadkaaga
Xanuunka Gastric, caloosha, xajinta mindhicirada ... Kuwani waa qaar ka mid ah cudurrada dheef-shiidka oo saameynaya maalin kasta. Waxay u muuqdaan kuwo lama huraan ah. Hase ahaatee xalku wuxuu ku jiraa cunto caafimaad leh iyo isticmaalka daawooyinka dabiiciga ah. Taasi waa sababta qodobkan aanu kuu soo bandhigi doono faa'iidooyinka daawooyinka dabiiciga ah ee kaa caawin kara inaad si fiican u dheefsato.
Dheef-shiididdu waa habka ay cuntada u burburto taagoo fudud oo loo isticmaali karo unugyada jirka, haddii ay si wanaagsan u shaqeynayaan ama ay soo saaraan tamar dhaqaale. Xubnaha habka dheef-shiidka ayaa masuul ka ah hannaankan.
Nidaamka dheef-shiidka waxaa ka mid ah:
Afka: Tani waa meesha qashin iyo quudinta cuntada. Sidaa daraadeed waa bilawga sifeyntooda kiimikada, badanaa laga helo carbohydrateska.
Qalabka: Bukaanka xuubka ah ee ku yaal qoortu waxay isku xiraysaa afka iyo sankuubka hunguriga iyo caleenta. Waxay u ogolaataa marinka hawada iyo cuntada iyada oo loo marayo qalab loogu yeero hurgunka.
Cuncunka: waa kareem uumi u ah caloosha. Derbiyada muruqa ah waxay qandaraas ka dhigaan oo jug galaan jihada hoose sidaas darteed u ogolaanaya marinka of bolus ah. Aad ayay u jilicsan tahay waana la dhaawici karaa haddii ay jirto xaalad celin ah astaamaha caloosha.
Caloosha: boorsada muruqa ayaa ka mas'uul ah kaydinta iyo daaweynta cuntada la cuno. Unugyada asaasiga ah iyo enzymes ayaa la sameeyaa kuwaas oo u oggolaanaya dheef-shiid kiimikaad ee lipids iyo borotiinka, walxaha kale.
Xiidmaha yar-yar: Waxay ku saabsan tahay mitirka mitirka 6 waxana uu ku yaalaa caloosha. Waxay ka qaadataa dheecaanka ka soo baxa beeryarada iyo qanjidhada kale ee ay enzymes ku dhamaanayso beddelay cuntooyinka maadadaha fudud sida amino acids. Waxaa abuura duodenum, jejunum iyo bolum, halkaas oo nuugista nafaqooyinka ay sidoo kale dhacdo.
Xiidmaha waaweyn: waxay qiyaastaa hal mitir iyo badh ka mid ah waxaana ka mid ah xiidanka iyo malawadka. Dhinaca kale, waxay ku dhammaanaysaa heerkulka dabada, halkaas oo ah hadhaaga dheefshiidka lagu baabi'iyo qaabka saxarada. Waa lagama maarmaan in la nuugo vitamin K, fiber iyo biyo.
Mid kasta oo ka mid ah qaybahan waa la saari karaa marka caadooyinkeena cunid ama qaab nololeed aan caafimaad lahayn. Cunista cuntooyinka aan la karin ama aan loo baahnayn, isticmaalka badan ee daroogada iyo / ama aalkolada, qaadashada daawooyinka qaarkood iyo xitaa stress waxay asal ahaan ka soo jeedaan cudurada kala duwan. Kiisaska ugu caansan, waxaynu helnaa caloosha, caloosha iyo shubanka, laakiin waxaad ku jiri kartaa dhibaatooyin cudurro dabadheeraad ah.
Eeg sidoo kale: Diyaarso 4 Makhaayadda dabiiciga ah ee dabiiciga ah
Waxaa jira daaweyn dabeecadeed oo badan oo faa'iido leh markaan rabno inaan isticmaalo mukhaadaraadka awoodda leh. Halkan waxaan ku soo bandhigi doonaa.
Daawooyinka dabiiciga ah si ay u caawiyaan dheefshiidka
Waxaa had iyo jeer lagula taliyaa in aad u tagto dhakhtarka, laakiin waxaa kale oo jira shaashado dabiici ah iyo diyaargaroowyo kale oo loo isticmaalo awoowayaasheen waqti aad u dheer waxayna caawineysaa yaraynta xanuunka dheefshiidka. Ma dooneysaa inaad ogaato?
1. Faleebo ku jirta chamomile
Sannado badan, waxaanu tixgelinnay camomile sida dhirta dheef-shiidka. Its saliidaha lagama maarmaanka ah waxay siinaysaa dheefshiidka, carminative, antispasmodic iyo sifooyin milan. Chamomile sidaas darteed waa ku fiican yahay hagaajinta dheef-shiid kiimikaadka, yaraynta boogaha caloosha iyo ka hortagga qashinka.
Sida loo diyaariyo?
Haddii aad rabto in aad diyaariso faleebo, si fudud u samee koob biyo ah 1 iyo, marka uu boogo, ku dar gram 2 caleemo ama ubaxyo chamomile. U daa daqiiqado 5 si fiican u daboolan. Cunto kulul ka dib cunto kasta.
Tani dhab ahaantii aad xiiseyn doonto? Talooyinka guriga loogu talagalay murqaha raaxeysiga
2. Shaaha qoraxda
Marka lagu daro isticmaalka daaweynta caabuqyada neef-mareenka, qoraxda ayaa sidoo kale loo tixgeliyaa tuunjir loogu talagalay xanuunka dheefshiidka. Mucaawadani waxay ka caawisaa sidii loola dagaalami lahaa dhibaatooyinka lafdhabarka, lallabbada iyo shubanka. Si kastaba ha noqotee, waa in laga fogaadaa dadka qaba dareemaha ama boogaha sababtoo ah waxay kicinaysaa dheecaanka casiirka miirista.
Ku bilaw biyo karkariyo digsi, ka dibna ku dar ulaha qoraxda 1 ama 2. U istaag saacadaha 10 iyo haddii aad rabto, waxaad ku macaanaan kartaa miisaanka 1 ee malab.
3. Star shaaha ah
Xiddiga star, ama xiddig xiddigaha Chinese, waxay u egtahay dhadhankakamuunta. Hadda, waxay ka heshay pericarp of theWaxyeelo naafo ah. Warshadani waa dhul daaqsiin ah oo ku dhasha dalka Shiinaha kuwaas oo hantidoodu faa'iido u tahay nidaamka dheef-shiidka. Waxyaabahani waxay ka kooban tahay anethole, oo ah dhismo aromatic ah oo u muuqata in ay aad u caawineyso caloolxanuun iyo lallabo, iyo sidoo kale in la dagaallamo barar iyo gaas. Sidoo kale, xiddigta xiddigta ayaa leh daawooyinka antibiyootigga, antibiotikada iyo antiparasitic.
Heat 1 litir oo biyo ah oo ku dar garaamyada 30 ee kalluunka wakhtiga karkaraya. Ha qaboobo. Waxaad cabbi kartaa koob markii aad u baahatid. Si kastaba ha noqotee, laguma talinayo in la isticmaalo haweenka uurka leh iyo carruurta yaryar.
4. Shaash leh kalluunka liinta
La melissa officinalis, oo loo yaqaan 'balmoon liin', ama kalluunka liinta, waa warshad loo isticmaalo tan iyo wakhtiyadii hore sida dheefshiidka. Waxay ka kooban tahay terpenes, citronellol, citral iyo geraniol, maaddooyinka firfircoon ee siinaya dhadhanka dhadhanka iyo guryaha sifooyinka. Waxaa loo isticmaalaa in lagu xannibo xanuunada la xidhiidha cadaadiska iyo walaaca, iyo sidoo kale mindhicirka mindhicirka, caloolajka, miyir-beeleedka iyo xajmiga.
Si aad u diyaariso koobkan shaaha, waxaad u baahan doontaa miisaanka 3 ee caleemo liin la qalajiyey. Haddii aad isticmaasho caleemo cusub, waxaad u baahan tahay 3 ilaa gram 9. Markaa kuleylka galaas biyo iyo marka uu boogo, ku dar caleemaha. Ha u furfuraan daqiiqado 10. Waxaad cabbi kartaa shaahkan mar kasta oo aad rabto.
Ugu dambeyntii, maskaxda ku hay in dheef-shiid kiimikaadka wanaagsani kaa caawin doono inaad hesho maalin wanaagsan. Beddelida caadooyinkaaga cunitaanka iyo hoggaaminta qaab nololeedka firfircoon wuxuu dhiirigelin doonaa gaadiidka xiidmaha, sidaas darteed dheefshiidka. Sidaas, isku day!
Astaamaynta: 4 Calaamadaha Cove
Inkasta oo lagu taliyey in laga fogaado isticmaalka xad-dhaafka, dhoobada ayaa gacan ka geysanaya xakamaynta dhibaatooyinka dheefshiidka. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/camomille-et-autres-remedes-pour-faciliter-la-digestion/